SASH ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်ဟောင်းများသည်သင်၏ Brain On Porn အီးမေးလ်ကိုလိမ်လည်ခဲ့ကြသည်
SASH ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်ဟောင်းများသည်အီးမေးလ်များကိုလိမ်လည်လှည့်ဖျားကြသည်
စာနာတတ်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အကူအညီဖြင့် ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prause သွယ်ဝိုက်စုဆောင်း ဟောင်းတဦး SASH ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များသည်ဂယ်ရီ Wilson နှင့်အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များရေးသောစာကိုရေးရန်။ ထို့နောက်သူမက၎င်းအားတရားရုံးမှခွင့်မပြုဘဲတင်သွင်းသည့်အမိန့်ကိုရှည်လျားစွာထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ တရားခံအဖြစ်သူမ၏အမည်ရအသရေဖျက်မှုဝတ်စုံကို.
သူမကိုနိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၉ တွင် ကြောင်းအမှု၌ထုတ်ပယ်ရန်အဆိုကိုငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။ အခုတော့သူမကသူမရဲ့အခြေအမြစ်မရှိသောညစ်ညမ်းမှုကိုတန်ရာတန်ကြေးအဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေသည်။
ဂယ်ရီ Wilson မှယခင် SASH ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များထံပေးပို့သောစာ (၉/၂၅/၁၉)
မှ: ဂယ်ရီ Wilson[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]>
Sent: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 25, 2019 8:57 pm တွင်
subject: RE: SASH ဘုတ်အဖွဲ့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုပေးစာ
Marnia က SASH ၏ဥက္ကဌသည်သင့်အား SASH ဘုတ်အဖွဲ့မှထောက်ခံချက်ပေးပြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်သင်၏စာမှသင်၏စာသည်အခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်နေသောပိုမိုကြီးမားသောအခြေအနေကိုသင်သတိမပြုမိပုံရသည်။ ဆက်စပ်ကိစ္စရပ်များမပြီးဆုံးသေးသောကြောင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တက်လာခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည်သတင်းအတုခေတ်တွင်အသက်ရှင်နေကြောင်းကျွန်ုပ်အပြည့်အ ၀ သတိပြုမိကြောင်းပထမ ဦး စွာပြောပါရစေ။ ကြောက်စိတ်များနှင့်မလိုမုန်းထားစိတ်များကိုထိပါးစေသော smear ကင်ပိန်းများဖြင့်အလွယ်တကူကိုင်တွယ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ငါဒါမင်းရဲ့စာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာယုံတယ်။ ဒါဟာဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အားလုံးလွန်းဘုံ။
လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကဒေါက်တာနီကိုးလ်ပရာယပ်စ်ကသူမအနေဖြင့်တရားခံဖြစ်သည့်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုတွင်ဖတ်ရှုသည့်အခါသင်၏စာကိုကျွန်ုပ်ပထမဆုံးအကြိမ်သိရှိခဲ့ရသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်သူမ SASH ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Don Hilton MD ကသူမကိုသူမတို့ထိဖူး၊ မ ၀ တ်ခဲ့ဘူး၊ အဆက်အသွယ်မလုပ်ဖူးဟုဝန်ခံခဲ့သော်လည်းသူမကို“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်း” ခံခဲ့ရသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဟီလ်တန်သည်သူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂုဏ်သတင်းကိုစွန့်စားသောကြောင့်သူသည်အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံတင်ရန် မှလွဲ၍ အခြားရွေးစရာမရှိဟုခံစားခဲ့ရသည်။ Hilton ၏ဝတ်စုံအရကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်အခြား ၉ ဦး သည်အလားတူအန္တရာယ်ရှိသောသတင်းပေးပို့ခြင်းဖြစ်ရပ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ရေးသားထားသည်။
Dr. Prause သည်သူမ၏တိုင်ကြားချက်ကို Texas ပြည်နယ် San Hilton ရှိဆေးကျောင်းတွင်တွဲဖက်သင်ကြားပေးသောတက္ကဆက်တက္ကသိုလ်သို့တင်ပြခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ကသူသည် ၀ န်ထမ်းမဟုတ်ကြောင်းနှင့်ခေါင်းစဉ် ၉ သည်ဒါကြောင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းပြသောအခါ၊ ဟီလ်တန်သည်မူပိုင်ဆောင်းပါးများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ဂျာနယ် ၂ ခုကိုသူမအောင်မြင်စွာညည်းညူခဲ့သည်။ သူဖြစ်သော်လည်း, UT မှာတရားဝင်တွဲဖက်ဒြေ) သော်လည်း။ ထို့နောက်သူသည် Hilton ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့သို့တိုင်ကြားချက်ကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောကျမ်းကျိန်လွှာ ၉ ခုအပါအ ၀ င်ဒီဝတ်စုံနှင့် ပတ်သတ်၍ သင်ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ Donald Hilton သည် Nicole Prause အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက Dr.Prause သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာလျှောက်လွှာတင်သွင်းခဲ့သည် ကျွန်ုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ URL ဖြစ်သော“ yourbrainonporn.com” နှင့်“ သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းသောအကြောင်းအရာ” (ငါ့စာအုပ်၏ခေါင်းစဉ်နှင့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု၏သက်တမ်းရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်အမည်) အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤလျှောက်လွှာကိုရှည်လျား။ အကုန်အကျများစွာဆန့်ကျင်နေပါသည်။
လအနည်းငယ်အကြာတွင် Dr. Prause ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည် ScienceOfArousal.com ဟုခေါ်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ Dr.OraArausal.com ။ ချက်ချင်းပင်၎င်းသည်၎င်း၏အမည်နှင့် URL ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ငါ့ဘုံဥပဒေအမှတ်အသားများကိုချိုးဖောက်ရန် Realyourbrainonporn.com။ ကျွန်ုပ်သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုမှုကိုအမှုဖွင့်ရန်အဆင်သင့်ရှိနေသည်။ ဒေါက်တာ Prause သည်ယခုအချိန်အထိသူမ၏မူလ၊ ချိုးဖောက်မှုမရှိသော URL သို့မပြန်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သောသင်၏စာသည်သူမ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ချိုးဖောက်မှုအားထုတ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ Dr.Prause ၏အသနားခံစာတွင်ထပ်မံပေါ်ထွက်လာမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
"အဖြူ supremacist" smear မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး
နှစ်ပေါင်းများစွာဒေါက်တာ Prause နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Dr. Ley သည်ကျွန်ုပ်သည်ဖက်ဆစ်ဝါဒဖြူ supremacist ဖြစ်ကြောင်းအင်တာနက်မှတ်စုတစ်ခုဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမပစ်မှတ်ထားနေသည့်တစ်ခုတည်းသောသူမဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့သည် NoFap အသိုင်းအဝိုင်း (နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုရှောင်ကြဉ်သူမည်သူမဆို) ကိုဖက်ဆစ်များ၊ misogynists များ၊ မုဒိမ်းကျင့်သူများနှင့်အမဲလိုက်သမားများအဖြစ်သရုပ်ဖော်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ အောက်ပါလင့်များသည် Dr.Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်နေရောင်ခြည်ကိုသွန်းလောင်းရန်ကျွန်ုပ်ဖန်တီးခဲ့သောစာမျက်နှာ၏ကဏ္toများကိုသွားသည်။ ဤရွေ့ကားအထူးသ "ဖက်ဆစ်, အဖြူ supremacist" အားထုတ်မှုကိုဖြေရှင်း။
၂၀၁၀ ဇွန်၊ ဇွန် - David Ley နှင့် Prause (RealYBOP Twitter နှင့် "sciencearousal") တို့ကညစ်ညမ်းသောပြန်လည်နာလန်ထူမှုဖိုရမ်များကိုအဖြူ supremacists / နာဇီများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုဆက်လုပ်သည်
၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ - twitter သည်အလက်ဇန္ဒားရော့ဒ်စ်နှင့် Nofap ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ - NoFap & Alexander Rhodes ကိုဂုဏ်ပြုရန် Prause သည် Xhamster သို့ဆက်သွယ်သည်။ Nicole Prause သည်“ ကျွမ်းကျင်သူ” ဖြစ်သည့် Hit-piece ကိုထုတ်ဝေရန် Fatherly.com ကိုသွေးဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၉ သြဂုတ်၊ massဂုတ်လ ၂ ရက် (El Paso & Dayton) အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုအပြီးတွင်နီကိုးလ် Prause နှင့် David Ley တို့သည်ဂယ်ရီ Wilson၊ YBOP နှင့် Nofap တို့ကိုအဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒနှင့်နာဇီများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသည်
ကျွန်ုပ်၏“ ဖက်ဆစ်ဝါဒ” ဒေါက်တာပရူ့၏တစ် ဦး တည်းသောသက်သေသာဓကမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကနေဒါနိုင်ငံသားတစ် ဦး နှင့် (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော) Podcast တခုကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အိုင်ကျူနှင့်တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုတစုံတရာမရှိပါ။ Podcast နှင့်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ကြည့်နိုင်သည်။ Stefan Molyneux အင်တာဗျူးများဂယ်ရီ Wilson က။ သူ့ကိုယ်သူ Dr.Prause ကတစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းကို (ရှည်လျားစွာစွန့်ပစ်သွားသော) ဖက်ဆစ် newsfeed တစ်ခုသို့လွှင့်တင်ပြီးမျက်နှာပြင်ကိုယူသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမုန်းအုပ်စုနှင့်မည်သည့်ဆက်ဆံမှုမှမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုမည်သည့်အဖွဲ့သို့မျှမြှင့်တင်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏စာကိုမည်သူတင်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ အဲလက်စ်ရောဒ်စ်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်လစ်ဘရယ်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့်ဝေးကွာသည်။ အဲလက်စ်သည်သူ၏ဖိုရမ်များတွင်အမုန်းစကားများရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏အမြင်များကိုအလျင်အမြန်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူသိရှိနိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း "စာမျက်နှာ, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာနှင့်ဆက်စပ်သောဒီအင်တာဗျူး (လွန်ခဲ့သောလပေါင်းများစွာပြုသောအမှု) ကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့်။ ငါသည်ငါ့အမှားဖော်ပြရန် မိနစ် ၂၈ မှာစ။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင် (၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ) မှ AIDS လူနာများအားသေစေနိုင်သည့်သူနာပြုတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုဝင်များသည်အာဖရိကန်အမေရိကန်များနှင့်လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ ငါလစ်ဘရယ်ဆီယက်တဲလ်၌ဘုရားမဲ့ဝါဒီများကကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အမေဟာအလုပ်ခွင်မှာကုထုံးပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော့်အဖေဟာတစ်ချိန်တည်းမှာလိင်ဆက်ဆံတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးပါကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ကြောင်းသဘောတူလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည် ဒါပေမဲ့a"အဖြူ supremacist ။ "
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်စာအုပ်အတွက် SASH မီဒီယာဆုရရှိပြီးနောက်သင်၏စာကိုအများပြည်သူစာရွက်စာတမ်းဖြင့်ဖတ်ရှုခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်စိတ်ထိခိုက်မည်ဆိုပါစို့။ ကျွန်ုပ်၏ (တန်းတူညီမျှလက်ဝဲဘက် - ဇနီး) ၏ ၆ နှစ်နီးပါးအမှုဆောင်ပြီးနောက်သင့်စာ၏အချိန်ကိုက်ခြင်းကြောင့် Dr.Prause သည်အက္ခရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးကိုကြိုးကိုင်ခဲ့သည်ဟုတ်လား။
ကျွန်ုပ်သည်ဘယ်သောအခါမျှ SASH ၏အဖွဲ့ ၀ င်မဟုတ်၊ ဘုတ်အဖွဲ့သို့တိုင်ကြားခြင်း၊ (ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားမှုများရှိသော်လည်း) SASH ညီလာခံတွင်တင်ပြခြင်းသို့မဟုတ် SASH ဘုတ်အဖွဲ့ကိုလွှမ်းမိုးရန်မည်သည့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုမျှမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ SASH အတွက်မည်သည့်လေ့ကျင့်မှုမဆိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်ဘယ်သောအခါမျှအကူအညီမပေးခဲ့ပါ။
(Cara Tripodi မှအမည်စာရင်းတင်သွင်းပြီးဘုတ်အဖွဲ့၏ထောက်ခံမှုဖြင့်မဲပေးခြင်း - Marnia ကန့်ကွက်ခြင်းဖြင့်) မီဒီယာဆုရရှိရန်တိုတောင်းသောသွင်ပြင်အပြင်အပြင်, ငါ SASH ညီလာခံနှစ်ခုသာတက်ရောက်ခဲ့သည်။ Todd Love နှင့် Gabe Deem စကားပြောရန် Austin သို့သွားပြီး Marc Potenza စကားပြောရန် Salt Lake သို့သွားခဲ့သည်။
တကယ်တော့ငါကပြန်လည်ဆုတ်ခွာကြပြီမဟုတ်သည့် peer- ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများနှစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့ကြသည် ဒေါက်တာ Prause ၏ herculean အားထုတ်မှု ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုအားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်နှင့်၎င်းကိုဝီကီပီးဒီးယားတွင်အလွဲလွဲဖော်ပြရန်
သတင်းထောက်များသည်ကျွန်ုပ်အားမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်နေသော်လည်း (ကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုနှောင့်ယှက်သည့်အချိန်) သတင်းထောက်များသည်ကျွန်ုပ်တွင်မရှိသောအထောက်အထားများကိုရံဖန်ရံခါပေးအပ်ခဲ့ကြသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အထောက်အထားများကိုဘယ်သောအခါမျှတင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ရှင်းလင်းချက်အရကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းစာမျက်နှာ, ငါ "အငြိမ်းစားခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝကမ္မဗေဒ & ရောဂါဗေဒဆရာ။ " Sleight-of-Hand“ သက်သေအထောက်အထားများ” မည်သို့ထုတ်လုပ်သည်ကိုအသေးစိတ်သိလိုပါကကြည့်ပါ Prause မဟုတ်မမှန် Wilson ကမိမိအအထောက်အထားများအတုမူကြောင်းကိုမလုပ်ပဲ.
ဒီမှာဘယ်သူ့ကိုမှတစ်ခုခုလုပ်လို့ရမလားမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့မင်းအချက်အလက်တွေကိုသိစေချင်တယ်။ ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုရန်သင့်အာရုံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။